Nivory miafina ny mpanohitra sy diplaomaty vahiny? | Hevitra MPANOHARIANA
Misaotra aminy vaovaoa Jentilisa.
Asa raha ho fantatra, ary rahoviana ny valin'izao fanontaniako izao, raha toa ka nisy marina ilay fivoriana ::
1) Iza no nangataka fihaonana? Ny vahiny sa ny malagasy?
2) Inona no antony, arakarakin'ny valin'io?
- raha ny malagasy : fitarainana (ohatrany taminy SG ny ONU ohatra) , sa fangatahamn-toro hevitra, sa fangataham-pananpiana ho "firodanany fitondran'ny Filoha amperin'asa" sa ....?
- raha ireto vahiny voalaza : famporisihana ny fomba fanoherana rehetra, sa fanomezan-toro hevitra, sa fanomezan-toky ny fanohanana raha mihova famindra, sa fampatsarovana ny andraikitriny mpanohitriny firenena maniry demaokirasia, sa .....?
Nampidirin'i Kitana @ 08:19, 2007-05-27 [Valio]
Gazety maro indrindra fa ny tamin'ny teny malagasy manokana no niara-nanaiky ny fisian'io fivoriana io.
Efa tsy mety mamoaka ny votoatin-dresaka tahaka ny nahitana azy ireo tamin'ny toerana iray somary ambanivohitra izay (tsy nety niteny na tsy reko mihitsy ny tao amin'ny tvplus namoaka ny sarin-dry zalahy teo an-tokontany) izay niteny fa tsy fotoana ilazana izay votoatin-dresaka io.
Ny nakan'ny mpanao gazety an'ohatra fotsiny dia ilay fitenenana nataon-dRavalomanana tamin'ny fotoana nahatezitra azy teny Ivato hoe "Mametraka fanontaniana na manotanintany" iny. Nefa ny omalin'io andro io dia nangataka fihaonana tamin'ny solontenan'ny ffkm ry zalahy aloha dia ilay nalahelo fa tsy ny filoham-piangonana no nandray azy iny.
Nampidirin'i jentilisa @ 12:11, 2007-05-28 [Valio]